महिनावारीमा प्याड भन्दा झनै सुविधाजनक यी विकल्पहरु बारे जान्नुहोस् ? – Annapurna Post News
June 11, 2022 sujaLeaveaComment on महिनावारीमा प्याड भन्दा झनै सुविधाजनक यी विकल्पहरु बारे जान्नुहोस् ?
काठमाडौं । तपाईँ महिनावारीको समय छिटो छिटो प्याड फेर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ ?महिनावारीमा दिनभर काम गर्दा ढुक्कले लामो समय काम गर्न पाउने कसरी होला भन्ने तनावमा हुनुहुन्छ भने प्याडको विकल्पमा प्रयोग गर्न सकिने उत्पादनहरुको सूची यहाँ छ ।
पछिल्ला केही वर्षहरूमा, हाम्रो वातावरणको ह्रास डरलाग्दो दरमा बढेको छ । त्यहाँ धेरै संस्थाहरू छन् जसले पृथ्वी बचाउन र दिगो वातावरण निर्माण गर्न काम गरिरहेका छन् ।
हामीले हाम्रो वरपरको वातावरण जोगाउन केही गर्नुपर्दछ र यो ससाना चिजहरुबाट सुरु गर्न सकिन्छ । प्रयोगमा नभएको बेला बत्तीहरू बन्द गर्नेदेखि लिएर इको–फ्रेन्डली उत्पादनहरू प्रयोग गर्ने जस्ता अन्य धेरै कुराहरू छन् जसले वातावरण संरक्षणमा योगदान दिन सक्छन् ।
वातावरण संरक्षणमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन को लागी महिनावारीमा पर्यावरण मैत्री उत्पादनको उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।यदि तपाईं आफ्नो महिनावारीमा कसरी लामो समयलाई थेग्ने प्याड राख्ने भन्ने अन्योलमा हुनुहुन्छ भने, तपाईंले विचार गर्नुपर्ने उत्पादनहरूको सूची यहाँ छ ।महिनावारी कप-महिनावारी कप एक प्रकारको पुनः उपयोग गर्न सकिने उत्पादन हो जसले तपाईंलाई पैसा बचत गर्न र वातावरणको सुरक्षा गर्न मद्दत गर्दछ ।
एउटै महिनावारी कप धेरै पटक प्रयोग गर्न सकिन्छ र एकपटक राखिसकेपछि १२ घण्टासम्म ढुक्क हुन्छ । कप भरिएपछि पुनः सफा गरेर प्रयोगमा ल्याउन पनि सकिन्छ । तिनीहरू सजिलै अनलाइन वा मेडिकल स्टोरहरूमा उपलब्ध हुन्छन् ।
यद्यपि, महिनावारी कपको बारेमा धेरै गलत धारणाहरू छन्, अध्ययनहरूले सुझाव दिन्छ कि तिनीहरू प्रयोग गर्न सुरक्षित छन् र सजिलै सफा गर्न सकिन्छ ।
के तपाईंले सामान्य प्याड धेरै पटक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ? सकिँदैन भने, पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने सेनेटरी प्याडहरू प्रयोग गरी आफ्नो नियमित प्याडहरू परिवर्तन गर्नुहोस् । पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने प्याडहरू धुन मिल्ने, प्रभावकारी र सामान्य एकल प्रयोग हुने सेनेटरी नेपकिनहरू भन्दा धेरै नरम हुन्छन् ।
तिनीहरू जैविक सामग्रीबाट बनेका हुन्छन् र नियमित प्याड जस्तै तर थोकमा किन्नको कम लागतमा धेरै समय महिनावारीको रगतलाई सोस्न सक्ने खालका हुन्छन् ।
तपाईले पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने प्याडलाई साबुन र तातो पानीले धुन सक्नुहुन्छ र तपाई अर्को महिनावारीको लागि किटाणुरहित बनाउन सक्नुहुन्छ ।
कुनै अतिरिक्त उत्पादन, कुनै असहज प्याड, र रगत बग्ने डर छैन, यो विशेष रूपमा निर्मित महिनावारीको अवधिको लागि बनाइएको अन्डरवेयर महिनावारी उत्पादनहरूको भविष्य हो ।
तिनीहरूले रगत अति–सोस्ने तरिकाबाट निर्माण गरिएका हुन्छन् । र, धुने कपडाबाट बनेका हुन्छन् जसले तपाइँको लुगामा रगत लाग्न दिँदैन ।
तिनीहरू अन्डरवियर र सेनेटरी प्याडको मिश्रण हुन् तर नियमित नेपकिनहरू भन्दा धेरै फरक छन् ।
सुरुमा, तपाईंले महिनावारीको समयमा कुनै पनि अतिरिक्त उत्पादन लगाउने बानी बसाल्न केही समय लाग्न सक्छ, तर एकचोटि तपाईंले प्रयोग गर्नुभयो भने, तपाईंले पक्कै नसोचेको सहजता महसुस गर्नुहुनेछ ।
अनन्या पाण्डेकी बहिनीले पार्टीमा मच्चइन् हंगामा, भित्री वस्त्र नलगाई पोज दिँदा स्कर्ट खुस्किएपछि भयो लाजमर्दो अवस्था
युवामा हुने ब्रेन ट्युमरका प्रारम्भिक लक्षण जान्नुहोस्
शल्यक्रियाबाट बच्चा निकाल्दाका फाइदा र बेफाइदा